IO FIANTSOANA IO – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 juillet 18, 2017 Laisser un commentaire sur IO FIANTSOANA IO
« Raby, aiza ianao no mitoetra? Hoy Izy taminy: Avia fa ho hitanareo. » Jaona 1:38b-39a
– Fanontaniana nataon’ireo mpianatr’i Jaona roa lahy tamin’i Jesosy io. Matoa voalaza eto fa mpianatr’i Jaona izy ireo dia efa nianatra tamin’i Jaona. Eo ambony moa dia voalaza fa notondroin’i Jaona tamin’izy roa lahy Jesosy: «indro ny zanak’ondrin’Andriamanitra». Raha nanaraka an’i Jesosy izany izy roa lahy dia araka ny tenin’i Jesosy hoe: Avia fa ho hitanareo. Nahita izay nitoerany izy, ary nitoetra teo aminy tamin’izany andro izany. Nanana finoana izy roa lahy ka tonga dia nanaraka an’i Jesosy.
– Voalaza ao amin’ i Matio 8:20 fa ny Zanak’olona tsy manana izay hipetrahan’ny lohany. Araka ny tanatara dia i Jodasy no mpianatra niala tamin’i Jesosy. Fa i Andrea, iray tamin’izy roa lahy ireto dia tsy niala. Ka na dia tsy nisy nametrahany ny lohany aza dia nanaraka ny Tompo ihany izy.
– Isika koa raha manaraka ny Tompo dia hanao ahoana? Haharitra ny zavatra rehetra ve? Mino ve isika fa tsy hitarika antsika amin’ny loza Jesosy fa mahalala ny hevitra hiheverana antsika tokoa Izy? Raha maharitra sy miharitra isika dia tsy hiala Aminy fa Izy ihany no hanefa ny fiantsoana antsika.
Publié parfilazantsaramada juillet 18, 2017 Publié dansUncategorized